Dowlada Soomaaliya oo dhigeeda Turkiga kala Hadashay Arimo Muhiim oo khuseeya Labaa Dal – Daily Som
Dowlada Soomaaliya oo dhigeeda Turkiga kala Hadashay Arimo Muhiim oo khuseeya Labaa Dal
Xukuumada Soomaaliya ayaa waxa ay kala hadashay Xukuumada Turkiga Arimo badan oo quseeya labada, iyada oo uu maalmihii ugu dambeeyay Ra’iisul Wasaare xigeenka dalka Mahdi Maxamuud Guuleed (Khadar), uu safar shaqo ku jooga magaalada Ankara ee Caasimada dalka Turkiga.
Ra’isul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed ayaa la kulmay dhiggiisa Dalkaas, Dr Recep Akdag, waxa ayna ka wada hadleen xaalada Guud ee uu dalku marayo iyo dadaalada ay wado dowlada Soomaaliya iyo hishiisyo kal hore ay kala saxiixdeen labada Dowlaood sida loo fulin lahaa.
Mudane Guuleed ayaa sidoo kale waxa uu kala hadlay Dr Recep Akdag wanaajinta xariirka qotadda dheer ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga.
“Waxa aan Ankara kula kulmay Ra’iisul wasaare ku xigeenka Turkiga, Dr Recep Akdag. Waxaanu kawada hadalay xiriirka labadda dal ee dhinacyada iskaashiga dhaqaalaha Ganacsiga iyo waxbarashada ee Soomaaliya iyo Turkiga”, ayuu yiri Ra’iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar.
Dowlada Soomaaliya oo dhigeeda Turkiga kala Hadashay Arimo Muhiim oo khuseeya Labaa Dal added by Staff on May 15, 2018